Ciyaaryahankii Ajax Abdelhak Nouri oo la sheegay inuu ka soo toosay koma uu galay labo sano… – Hagaag.com
Ciyaaryahankii kooxda Ajax ee Abdelhak Nouri ayaa ka soo toosay koma uu galay xilli uu ciyaar ku jiray, waxaana uu kasoo toosay kadib 2 sano iyo sideed bilood, sida ay baahinayaan warbaahinta.
Wiil la dhashay ciyaaryahanka oo lagu magacaabo Abderrahim ayaa warbaahinta Dutch daily De Telegraaf u sheegay in walaalkii oo 22-jir ah uu kasoo toosay komihii uu ku jiray 32-da bilood, uuna imanka muujiyay dhaq-dhaqaaq nololeed.
Ciyaaryahankan ayaa ku dhacay ciyaar-saaxiibtenimo oo ay kooxdiisa Ajax la ciyaareysay kooxda Jarmalka ah ee Werder Bremen bishii July 8, 2017 taas oo ka dhacday dalka Austria, waxaana markaasi la sheegay in uu asiibay xanuun dhanka wadnaha oo markii dambe wax gaarsiiyey maskaxda oo afka ingiiska lagu yiraahdo “cardiac arrest “.
Abdelhak oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Marooko ayaa haysta dhalashada Dutch, waxaana uu u ciyaaraa kooxda Ajax ee ka soo jeeda caasimadda dalka Holland ee Amsterdam, wuxuuna ka qalin jebiyey dugsiga ciyaaraha ee Ajax, wuxuu sidoo kale ahaa laacib mustaqbal ifaya lahaa marka loo fiiriyo hannaanka ciyaarihiisa iyo xirfada sare ee uu lahaa. Ilaahay ha caafiyo…